Magetsi & Nyowani Simba Rori Refrigeration Unit fekitori uye vagadziri SONGZ
SE dzakateedzana rudzi rwemhando izere yemagetsi rori firiji yeyiyi minivan, van kana rori iyo yaishandiswa kwenguva pfupi kana yepakati kureba kutakura.
Technical Ratidziro yeRori Refriji SE Series:
Muenzaniso SE200-T SE250 SE400 SE500
Simba rakakodzera DC300V≤ Mota≤DC700V yemagetsi yakamira AC220V DC300V≤ Mota≤DC700V yemagetsi yakamira AC220V DC300V≤ Mota≤DC700V yemagetsi yakamira AC380V / AC220V DC300V≤ Mota≤DC700V yemagetsi yakamira AC380V / AC220V
Zvinoshanda Tembiricha （℃） -25 ～ 20 -25 ～ 20 -25 ～ 20 -25 ～ 20
Zvinoshanda Vhoriyamu （m3） 5, 8 6 ～ 10 12 ～ 18 14 ～ 22
Zvinoshanda Vhoriyamu -18 ℃ （m3） 6 8 16 18
Kutonhora Kugona （W）
Yakanyatso kuvharwa rotor mhando
Yakazara yakavharwa rotor mhando (DC frequency kutendeuka)
Evaporator Yemhepo Vhoriyamu （m3 / h） 900 1800 1800 1800
Kutengesa Vhoriyamu （kg） 1.1 1.2 1.5 1.5
Simba （W 1600 1700 2800 3500
Kuiswa Roof yakaiswa split split
Pamberi pekusungirirwa kwakabatana unit
Evaporator divi （mm） 610 * 515 * 160 1291 * 1172 * 265 1400 * 1152 * 482 1530 * 735 * 675
Condenser divi （mm） 1250 * 920 * 220
SE200 - T Ruzivo rwehunyanzvi SE250 Ruzivo rwehunyanzvi SE400 Ruzivo rwehunyanzvi
Yakatsanangurwa Yehunyanzvi Kuzivisa kweSE Series
1. Yese-in-one unit: Meat trailer mayuniti akakodzera kurodha zvimwe zvinhu arikushandiswa zvakanyanya, izvo zvinoda yakawanda compact dhizaini uye kugadzirisa zviri nyore.
2. Sterilization uye yekuzvichenesa tekinoroji: kutakura zvinhu kunotakura huwandu hwakawanda hwehutachiona. Iyo unit ine UV uye ozone sterilizer inogona sterilize uye disinfect iyo yose chingoro kudzivirira zvisaririra zvinokuvadza zvinhu uye kuchengetedza chikafu chengetedzo. Panguva imwecheteyo, nzira dzakakosha dzekuchenesa dzinoshandiswa kuita kuti evaporator iwedzere kuzvisimbisa. Chando chinonyungudika choga, ichigeza tsvina iri pamusoro peiyo evaporator, ichichengeta evaporator yakachena uye isina hwema.
4. DC frequency kutendeuka tekinoroji: inotora sine wave yakazara DC frequency shanduko tekinoroji kudzora, iyo komputa komputa inowedzerwa neanopfuura makumi matatu% zvichienzaniswa neyakajairika AC yakagadziriswa frequency compressors, ichiona mileage yemotokari.
5. Kubudirira kweR404A DC inverter compressor
Kuvimba nehunyanzvi simba reSongz, yakagadzira DC inverter compressor yakashandiswa kune yakasarudzika R404A inoshanda svikiro yefriji, iyo inogona kuona izvo zvinodikanwa zvechando nekukurumidza uye kuzadzisa chinangwa chekwakanyanya kushanda, kuchengetedza simba uye chaiyo tembiricha kudzora.
Ndichiri pari zvino, iwo emagetsi mafriji mayunifomu muindasitiri ese anoshandisa AC yakamisikidzwa-frequency compressors. Ichi chirongwa chine simba rakawanda rekushandisa, hombe tembiricha inochinja mukamuri, uye haigone kuzadzisa zvinodikanwa zvekuchengetedza.
6. Brushless fan: Hupenyu hwebasa hwebrashi fan inowedzerwa kubva pamazana zviuru zvemaawa kusvika pane anopfuura maawa zviuru makumi mana, iyo fan fan inowedzerwa neinopfuura 20%, uye iyo yekuchengetedza simba uye kugona kwehupfumi kunovandudzwa zvakanyanya. Kushandiswa kwekuenderera mberi kwekugadzirisa kutonga, neinomanikidza sensor uye tembiricha sensor kuti uwane system optimization.
7. Kubudirira kwevatatu-mu-mumwe controller
Sanganisa zviripo AC / DC-DC vashanduri, frequency switch, uye controller discrete zvinhu, govana zvemukati zvinoshanda mamodule, uye dhizaini-in-one controller ine yakanyanya kuchengetedzeka, yakakwira dziviriro nhanho (IP67), diki saizi, uye pre-kuchaja basa . EMC inogona kusangana nezvinodiwa zveGG / T 18655 CLASS 3, uye woziva kutaurirana nemotokari yese KUNOGONA bhazi, iine basa rekutarisa kure.
8. Yakakwirira chengetedzo dhizaini
Matatu-chikamu kuputira: Basic, anobatsira uye akasimbisa kuputira
Software chengetedzo: Pamusoro-pari zvino, pamusoro-voltage, pasi-voltage uye chikamu-kurasikirwa otomatiki dziviriro
Kaviri yepamusoro voltage chengetedzo: Yakakwira-voltage switch & yepamusoro-yekumanikidza yekushandisa kifaa
Dhizaini yekudzivirira moto
Maitiro Ekushandisa eRori Refriji Yuniti SE Series:
Pashure: Pamberi Yakakwira Yakananga Dhiraivha Rori Refriji Yuniti
Zvadaro: Yega-inofambiswa Rori Refriji Yuniti
Front vakatasva Direct Drive Rori Refrigeration ...